INDRINDRA vaovao ADDERLink ™ INDRINDRA 3000 no manome ny fampielezam-peo mivantana ny mpampita vaovao | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » Featured » NY ADDERLink ™ Fizarana vaovao ADDERLink ™ 3000 Manome ny fampielezam-peo amin'ny fotoana tena izy
Ny votoaty lehibe no valisoa tsara indrindra azon'ny matihanina matihanina amin'ny alàlan'ny mpihaino azy. Saingy ny famokarana rehetra dia mitaky ny teknolojia mety hananana famelabelarana stellar. Raha afaka mahita fifandraisana mety ny famoronana hampitàna ny votoatiny dia mahatonga azy ireo hahomby kokoa. Izany no antony mahatonga ny indostria manana mpitondra fifandraisana toy ny menarana Teknolojia izay manome vahaolana fifandraisana sy fampisehoana avo lenta, izay tsy isalasalana ny fisongadinan'izy ireo ny fanavaozana farany fanaon'izy ireo, roa, roa, loha, USB 2.0 IP KVM, ADDERLink ™ INFINITY 3000.
About menarana Teknolojia
Hatramin'ny taona 1984, menarana Teknolojia dia nitombo ho lasa mpitondra eran-tany amin'ny vahaolana fifandraisana ary ny IP KVM avo lenta. ny menarana Ny lova ara-teknolojia dia niompana amin'ny fampandrosoana sy ny famokarana vokatra mitarika ny tsena izay mahatonga ny mpanjifa ho lasa fifehezana sy fandriam-pahalemena amin'ny alàlan'ny fitantanana ny fangatahana iraka manosika ny iraka, manerana ny indostrian'ny indostria.
menarana Teknolojia miasa toy ny orinasa mahafa-po sy mandrisika ho isan'ireo ary manandratra ny tenany amin'ny fanomezana tontolo mahaliana sy mamorona ho an'ny fitomboana sy fahombiazana amin'ny ho avy. ny menarana fahazoan-dàlana mifamadika, fanitarana ary vahaolana IP dia ahafahana mifehy ny rafitra IT eo an-toerana, lavitra sy manerantany amin'ny indostrian'ny orinasa toy ny fandefasana, baiko sy fanaraha-maso, fitaterana, banky, fitsaboana, ary federaly. Ilay orinasa dia nalaza noho ny fahaizany ara-teknika, ny fampisehoana azo antoka ary ny famokarana matanjaka, ary ny vokatra feno ao aminy dia fenon'ny serivisy tolotra matihanina feno, izay ahafahan'ny mpanjifa amin'ny indostrian'ny indostria samihafa manitatra, mihodina, matrix ary manara-maso akaiky ny peripheral na eo an-toerana na amin'ny alàlan'ny IP. menarana Teknolojia manampy amin'ny famahana ny fifandraisana IT sy ny fidirana an-dàlana lavitra ho an'ireo fampiharana misimisy momba ny misiônera any amin'ny tontolo maro be, ary amin'ny fisian'izy ireo vaovao ADDERLink ™ INFINITY 3000, dia azo antoka fa hanohy ny fanatanterahana izany fahatokisana izany.
Ny ADDERLink ™ INFINITY 3000
Tany am-piandohan'ity taona ity, ny ADDERLink ™ INFINITY 3000, na ALIF3000, dia navotsotra. The ALIF3000 manome ny fidirana amin'ny fotoana tena izy ho an'ny milina ara-batana sy virtoaly tsy voafetra avy amin'ny alàlan'ny fifandraisana an-tsinin'olombelona tokana (HMI). Ity andiam-pifandraisana ity dia natokana tanteraka hanohanana ny fandaharana fanatanjahantena sy ny manam-pahaizana manokana momba ny famokarana satria toa mahazo tombony amin'ny fahafaha-manavaozana sy ny fitomboana omen'ny fampiharana virtoaly izy ireo. Izany dia ahafahan'izy ireo mampiditra milentika mandeha amin'ny milina vatana sy birao virtoaly amin'ny fotoana tena izy. Ho fanampin'ny ADDERLink ™ INFINITY 3000, menarana Teknolojia manana vahaolana 4K IP KVM mandresy manana ny loka, ny ADDERLink ™ INFINITY 4000 Series, ary ny ADDERLink ipeps +. Izany dia mamela ny matihanina amin'ny haino aman-jery sy ny media miditra sy manova HD horonan-tsary avy amin'ny toerana maneran-tany toy ny hoe mifandray izy ireo eo an-toerana.
The ALIF3000 ny Ny famolavolana dia mamela azy io hampiditra ny fidirana VM ho any amin'ny tambajotra ADDERLink INFINITY efa misy nefa tsy miatrika fanelingelenana, fidiram-bola na fandoa lafo vidy. Miorina eo amin'ny fahombiazana Intel® Ny mari-pahaizana mikroprôklaôla X-86, izay mamela azy io hanaterana ny kalitao sary tonga lafatra, audio ary USB 2.0 ho an'ny lozisialy tokana na indroa mihoatra ny rohy 1GbE.
Amin'ny fampidirana ny ALIF3000 miaraka amin'ny ADDERLink INFINITY Manager (AIM), ireo mpandrindra dia afaka mamaritra mazava ny zon'ny mpampiasa mpampiasa azo antoka mba hiantohana fa ireo PC mikendry dia afaka mahazo alalana mpampiasa mpampiasa - manome fiadanan-tsaina sy antoka ho an'ny tompona orinasa.
Fampahalalana fanampiny an'ny ALIF3000 ahitana:
Ext. Drafitra: tsy voafetra mihoatra ny IP / 100m mihoatra ny CATx na fibre
Fanapahan-kevitra: hatramin'ny 2560 ×[mailaka voaaro]
Isan'ny pikantsary: ​​hatramin'ny 2
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny ALIF3000dia tsidiho ny www.adder.com/en/kvm-solutions/adderlink-infinity-3000.
Nahoana menarana Teknolojia Tsara ny fampielezam-baovao
ny menarana telo taona sy tapany ny lova navelany dia niasa mba hiara-miasa amin'ny sasantsasany amin'ireo mpampita vaovao eran'izao tontolo izao amin'ny famolavolana sy ny famokarana kofera KVM, hanitatra ary vahaolana matotra hanohanana ny fantsom-pahitalavitra feno. Ary io fitrandrahana io dia miainga avy amin'ny famoronana sy famokarana aorina mankany amin'ny efitrano fanaraha-maso sy ny tontolo iainana mivantana. Teknolojia Adder Ny toe-tsaina mpandraharaha dia tafiditra ao amin'ny kolontsaina orinasa izay miasa mafy, manentana ary mankalaza ary manohy fanavaozana hatrany amin'ny sehatry ny teknolojia ara-teknika izay mitohy ho lohalaharana. menarana Teknolojia tonga lafatra ho an'ny mpamoaka vaovao mitady hanana vahaolana fifandraisana mahomby kokoa sy ny IP KVM avo lenta.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny menarana Teknolojia fitsidihana www.adder.com/en.
menarana Teknolojia ADDERLink ipeps + ADDERLink ™ INFINITY 3000ADDERLink ™ INFINITY 3000 ADDERLink ™ INFINITY 4000 Series ALIF3000 fampitana injeniera fampitana Engineering matihanina sivy Vahaolana momba ny fifandraisana ary ny IP KVM avo lenta afa-po Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor Litra Matthews interface tsara ho an'ny olona iray SoftAtHome, MStar, CES2017 Spears & Arrows TVU Networks Video injeniera 2020-05-14
Previous: Penny Arcade Mampiasa ny Design Blackmagic ATEM Mini Switcher ho an'ny Live Streaming Workflow
Next: DPA Microphones 'MMA-Fifaneraserana nomerika nomerika dia manaporofo fa ilaina amin'ny famokarana avy any an-trano